အဆိုပါ Otero မိသားစုများ၏လူသတ်မှု
အဆုံးသတ်မှကြောက်မက်ဘွယ်သောအတစ်ခေတ်ဆောင်ခဲ့ - ဖေဖော်ဝါရီလ 26, 2005 တွင် Wichita ရဲတပ်ဖွဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးချုပ်နှောင်ထားသို့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အသွားအလာရပ်တန့်အတွက်ပန်းခြံစီးတီး, Kansas ပြည်နယ်များကအနီးတစ်ဦးဝန်ထမ်းယူပြီးပြီးနောက် BTK အမှတ်စဉ်လူသတ်သမားအမှုတစ်ခုဖမ်းဆီးလုပ်သောထုတ်ပြန်ကြေညာ ကျော်ကိုနှစ် 30 ကြာသော Wichita အသိုင်းအဝိုင်းသည်။
ဒန်းနစ် Rader တစ်မြို့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးပြိုကင်းထောက်ခေါင်းဆောင်နှင့်သူ့ဘုရားကျောင်းတစ်ခုတက်ကြွအဖွဲ့ဝင်သူက BTK အမှတ်စဉ်လူသတ်သမားခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။
အဆိုပါနောက်ခံလူ: ဇန်နဝါရီလ 15, 1974 တွင်, ငါပွဲ၌, ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပုခုံးတွ အသတ်ခံရ သည်ယောသပ် Otero ။ နှစ်ဦး Count -
အဆိုပါတရားရုံး: အားလုံးညာဘက်။ မစ္စတာ Rader, ငါနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များထွက်ရှာရန်လိုအပ်သည်။ သငျသညျမစ္စတာယောသပ်သည် Otero သတ်အံ့သောငှါသွား၏ရှိရာအထူးသဖြင့်နေ့, ဇန်နဝါရီလ, 1974 ခုနှစ်၏ 15 နေ့ရက်တွင်, သငျသညျအကြှနျုပျကိုပြောပြနိုင်မလား?
အဆိုပါနောက်ခံလူ: ရောမရဘူးလား, ငါက 1834 Edgemoor င်ထင်ပါတယ်။
အဆိုပါတရားရုံး: အားလုံးညာဘက်။ သင်အဲဒီမှာသွား၏တစ်နေ့တာဘယျအခြိနျခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပြောပြနိုင်ပါသလား?
အဆိုပါနောက်ခံလူ: 7:00 နှင့် 7:30 အကြားတစ်နေရာ။
အဆိုပါတရားရုံး: ဒီအထူးသဖြင့်တည်နေရာ, သငျသညျဤလူကိုသိသလော
အဆိုပါနောက်ခံလူ: ဒါကအမှတ် -
(။ အဆိုပါတရားခံများနှင့်မစ္စ McKinnon အကြား Off-the-စံချိန်ဆွေးနွေးမှု) မဟုတ်ပါ, ငါ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် - သင်တို့ကိုငါစိတ်ကူးယဉ်မခေါ်ငါ့အဘယျသို့မှန်းဆ။ ဤလူမရွေးခဲ့ကြ ။
အဆိုပါတရားရုံး: အားလုံးညာဘက်။ သငျသညျဒါ -
(ထိုတရားခံနှင့်မစ္စ McKinnon အကြား Off-the-စံချိန်ဆွေးနွေးမှု။ )
အဆိုပါတရားရုံး: - သင်ကအချိန်ကိုဤကာလအတွင်းစိတ်ကူးယဉ်အချို့မျိုးအတွက်စေ့စပ်ခဲ့ကြသလဲ
အဆိုပါတရားရုံး: အားလုံးညာဘက်။ အခုတော့သင်အသုံးအနှုန်းကိုသုံးပါရှိရာ "စိတ်ကူးယဉ်" ဤသူသည်သင်တို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပျော်အပါးအဘို့လုပ်နေတာခဲ့ကြသည်တစ်ခုခုဖြစ်သနည်း
အဆိုပါနောက်ခံလူ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်, ဆရာ။
အဆိုပါတရားရုံး: ငါကြည့်ပါ။ ဒါကြောင့်သင်ဤနေအိမ်သို့ သွား. နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ထို့နောက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်?
အဆိုပါနောက်ခံလူ: ကောင်းပြီ, ငါရှိခဲ့ပါတယ် - ငါမစ္စစ် Otero သို့မဟုတ်ဂျိုးဇက်ဖြစ်စေပြုသွားခဲ့ရာအပေါ်အချို့သောစဉ်းစားတွေးခေါ် ပြု. , အခြေခံအားဖြင့်အိမ်တော်သို့မချိုးဘဲ -or အိမျသို့ချိုးဖဲ့, ဒါပေမဲ့သူတို့အိမ်၏ထွက်လာသောအခါ ငါ လာ. မိသားစုရင်ဆိုင်, ပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုအရပ်မှသွား၏။
အဆိုပါတရားရုံး: အားလုံးညာဘက်။ သငျသညျရှေ့မဒီစီစဉ်ထားခဲ့သလဲ
အဆိုပါနောက်ခံလူ: အချို့ဒီဂရီစေရန်, ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်မအိမျတျော၌ရတယ်ပြီးနောက် - ကထိန်းချုပ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပေမယ့် -, သင်သိငါ၏အစိတ်နောက်ကျောမှာကျွန်မပြုပါသွားခဲ့ရာအချို့အတွေးအခေါ်များခဲ့ - ကဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါတရားရုံး: သင်ခဲ့ -
အဆိုပါနောက်ခံလူ: ဒါပေမယ့်ကိုယ့် - ငါအခြေခံအားဖြင့်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးနေ့အရမ်းထိတ်လန့ -
အဆိုပါနောက်ခံလူ: ငါမစ္စစ် Otero ထိုသူနှစ်ယောက်လေးတွေထင် - နှစ်ခုအငယ်လေးတွေအိမျတျော၌ရှိကြ၏။ ငါမစ္စတာ Otero ဂုဏ်နရှိခဲ့နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပေ။
အဆိုပါတရားရုံး: အားလုံးညာဘက်။ သင်ဘယ်လို, အိမျသို့မစ္စတာ Rader ရလာတာလဲ
အဆိုပါနောက်ခံလူ: ငါ, ဖုန်းလိုင်းဖြတ်ကျောတံခါးကိုမှတဆင့်သို့ရောက်လာသောနောက်ကျောတံခါးနားမှာငံ့လင့်လျက်ပင်မယ်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ဝေးလမ်းလျှောက်အကြောင်းကိုကြိုတင်မှာယူမှုများရှိခဲ့ပေမယ့်တော်တော်လေးမကြာမီတံခါးကိုဖွင့်လှစ်, ငါ၌ရှိ၏။
အဆိုပါတရားရုံး: အားလုံးညာဘက်။ ဒါကြောင့်တံခါးကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့။ ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုပြု၏ -
အဆိုပါနောက်ခံလူ: ငါကလေးတွေ၏တဦးတည်းထင် - ငါ Ju ထင် - အငယ်တန်း - သို့မဟုတ်မငယ်တန်း - ဟုတ်ကဲ့, အ - ထိုလူငယ်မိန်းကလေး - ယောသပ်သည်တံခါးကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့။ သူဖြစ်ကောင်းခွေးအချိန်တွင်အိမျတျော၌ဖြစ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ '' ခွေးကိုထုတ်ကြကုန်အံ့။
အဆိုပါတရားရုံး: အားလုံးညာဘက်။ သငျသညျအိမျသို့သှားသောအခါအဘယျသို့ထို့နောက်ဖွစျခဲ့သလဲ
အဆိုပါနောက်ခံလူ: ကောင်းပြီ, ငါမိသားစုရင်ဆိုင်အဆိုပါပစ္စတိုဆွဲမစ္စတာ Otero ရင်ဆိုင်နှင့်သူ့ကိုမေးသော် - သင်သိငါမှရှိကွောငျး - အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်မလိုချင်ခဲ့ကားမရချင်တယ်။
ငါသည်မွတ်သိပ်သောအခါ, အစားအစာ, ငါလိုချင်ခဲ့တာနဲ့ဧည့်ခန်း၌အိပ်သူ့ကိုမေးတယ်။ ထိုအခြိနျမှာငါတစ်ကယ့်ကိုအကောင်းစိတ်ကူးဖြစ်မဟုတ်ဘူးလို့သဘောပေါက်ဒါကြောင့်ငါနောက်ဆုံးတော့ - ခွေးအစစ်အမှန်ပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါကြောင့်ငါ - သူခွေးထွက်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါကကျွန်မမစ္စတာ Otero မေးတယ်။ ဒီတော့သူကလေးတွေထဲကတစ်ခုကထွက်ထားရှိခဲ့ပါတယ်, ပြီးတော့ငါပြန်အိပ်ခန်းသူတို့ကိုခေါ်သွားတယ်။
အဆိုပါတရားရုံး: သင်သည်အိပ်ခန်းမှ back တဲ့သူကိုယူ?
အဆိုပါနောက်ခံလူ: အဆိုပါမိသားစု, အိပ်ခန်း - လေးပါးအဖွဲ့ဝင်များက။
အဆိုပါတရားရုံး: အားလုံးညာဘက်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင်အဘယ်သို့ဖွစျခဲ့သလဲ
အဆိုပါနောက်ခံလူ: အဲဒီအချိန်တုန်းကငါ '' em တက်ချည်ထားလေ၏။
အဆိုပါတရားရုံး: နေဆဲမှာသူတို့ကိုကိုင်ပြီးနေစဉ် သေနတ် ?
အဆိုပါနောက်ခံလူ: ကောင်းပြီ, ချည်အကြား၌, ငါသည်သင်သိပုံပါဘဲ။
အဆိုပါတရားရုံး: အားလုံးညာဘက်။ သငျသညျဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောအရာကိုသူတို့ကိုတက်ချည်ထားပြီးနောက်?
မေီ Fisher သည်ကို 'Long Island တွင် Lolita' '
Colin ဖာဂူဆန်နှင့် Long Island တွင်ရထားလမ်းအသတ်ခံရမှု
Andrea Yates ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
Manson မိသားစုလူသတ်မှုနှိပ်စက်ခံရသူ Donald "Shorty" Shea ရဲ့ကလဲ့စား
Serial Killer ဂယ်ရီမိုက်ကယ်ဟီလ်တန်၏ရာဇဝတ်မှုများကို
မေီ Archer-Gilligan နှင့်သူမ၏လူသတ်မှုစက်ရုံ
Black ကမုဆိုးမ Killers - ငွေအဘို့အဦးသေဆုံးသူကားအဘယ်သူအမျိုးသမီးများနေ့
2009 Yamaha FZ6R ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ဘဝ၏ Kabbalah သစ်ပင်ပေါ်တွင်ကောင်းကင်တမန်အဘယ်သူသည်မှန်သလော
တက်ပြီးက Black Mesa: ဥက္ကလာဟိုးမားမြင့်မားသောပွိုင့်
အတိတျဆယ်စုနှစ်အတွင်းထိပ်တန်း5ရေကူးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ
Lewis က Waterman - ရေပန်းကလောင်
ထိပ်တန်းခရစ်ယာန်သီချင်းများ - ဇန်နဝါရီ 2015
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: Eniwetok ၏တိုက်ပွဲ
ဂီတအတွက်ယဉ်ကျေးမှုသင့်လျော်သော: မက်ဒေါနားကနေ Miley Cyrus ရဲ့ရန်
ပွငျသစျထဲတွင် (မေးပါရန်) "ဝယ်လိုအား" Conjugate လုပ်နည်း
Liu ဘရွတ်ကလင်း GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
Nostradamus 9/11 တိုက်ခိုက်မှုကိုခန့်မှန်းခဲ့သလား
Frida Kahlo ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဓါတ်ပုံပညာ၏သမိုင်း: ပေါက်ကိုဖောက်ပေးထားတယ်နှင့် Polaroid ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံများမှ
UNH GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
10 Creepy စုစုပေါင်း Unexplainable Paranormal ပုံပြင်များ
အမေရိကန်တော်လှန်ရေး: Paulus Hook ၏တိုက်ပွဲ